Faahfaahin ka soo baxaysa gaari waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu qabtay Muqdisho(Sawiro) – STAR FM SOMALIA
Afhayeenka Maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane ayaa sheegay in ciidanka nabad sugida inay gaari Kaarib ah oo lagu soo xiray waxyaalaha qarxa ay ku qabteen agagaarka dugsiga hoose dhexe ee Xaawo Taako oo ku yaalla dagmada Xamar-weyne.
C/fitaax Cumar Xalane ayaa intaa ku daray in ciidamada nabad sugida ay kala furfurida waxyaabihii lagu soo raray gaarigan ku guuleysteen kuwaasoo la doonayay in ay qarxaan.
“Baaritaan ayaa lagu hayaa ciddiika dambeysay in gaarigan ay soo dhigaan wadada isagoo ay ku raran yihiin waxyaalaha qarxa.”ayuu yiri afhayeenka maamulka gobolka Banaadir.
Ciidamada dowlada ayaa ku guuleystey dhowr jeer inay ku qabtaan magaalada Muqdisho gaari waxyaalaha qarxa lagu soo xirey hase yeeshee waxaa mararka qaarkood dhacda in baabuurta lagu soo raro waxyaalaha qarxa ay ku qarxaan goobo ay dad rayid ah ama ciidamaba joogaan.
Baarlamaanka Somaliya oo u yeeray Guddoomiyaha Bankiga Dhexe ee dalka